ပြေတီဦးရဲ့မွေးနေ့အတွက်ရည်ရွယ်လှူဒါန်းမယ့် ငွေတီဦး - Celegroup
ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပြေတီဦးကတော့ မိသားစုကိုအရမ်းချစ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် မိသားစုလေးကို အရမ်းချစ်သလို ညီမလေးနဲ့ မိဘတွေကိုလည်း အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပြေတီဦးရဲ့ ညီမဖြစ်သူ ငွေတီဦးကတော့ တူ ၊ တူမလေးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့အပြင် အစ်ကိုဖြစ်သူကိုလည်း အရမ်းလေးစားချစ်ခင်တဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ဆိုရမှာပါ ။
လတ်တလောမှာတော့ ငွေတီဦးက သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ တဆင့် မနက်ဖန် ပံ့သကူပစ်ဖို့ အဆင်သင့် လုပ်ပြီးပါပြီ..Silver Egg အဖွဲ့ဝင်တွေရော.. ဖေဖေနဲ့မေမေရော.. စင်္ကာပူက မမတို့ရော ပါဝင်လှူဒါန်းကြပါတယ် အဲဒီ့အပြင် နိုဝင်ဘာ ၃၀ မွေးနေ့ရှင် အူးတီအတွက် သံဃာသုံးပါးစာ လှူဒါန်းပေးပါတယ် ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ လပြည့်နေ့ ပံ့သကူအလှူလေးနဲ့အတူ စ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့အတွက်ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းမယ့်အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
လူရော သံဃာရော အလိုရှိတဲ့သူလက်ထဲ သေချာရောက်ရှိပါစေ. ဆိုတဲ့ ဆုမွန်ကောင်းလေးနဲ့အတူ လပြည့်နေ့အတွက် မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း မျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပြေတီဦးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ထပ်တူ ကုသိုလ်တွေ ရကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Ngwe Ti Oo
လတျတလောမှာတော့ ငှတေီဦးက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ တဆငျ့ မနကျဖနျ ပံ့သကူပဈဖို့ အဆငျသငျ့ လုပျပွီးပါပွီ..Silver Egg အဖှဲ့ဝငျတှရေော.. ဖဖေနေဲ့မမေရေော.. စင်ျကာပူက မမတို့ရော ပါဝငျလှူဒါနျးကွပါတယျ အဲဒီ့အပွငျ နိုဝငျဘာ ၃၀ မှေးနရှေ့ငျ အူးတီအတှကျ သံဃာသုံးပါးစာ လှူဒါနျးပေးပါတယျ ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ လပွညျ့နေ့ ပံ့သကူအလှူလေးနဲ့အတူ ဈကိုဖွဈသူရဲ့ မှေးနအေ့တှကျရညျစူးပွီး လှူဒါနျးမယျ့အကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
လူရော သံဃာရော အလိုရှိတဲ့သူလကျထဲ သခြောရောကျရှိပါစေ. ဆိုတဲ့ ဆုမှနျကောငျးလေးနဲ့အတူ လပွညျ့နအေ့တှကျ မှနျမွတျတဲ့ အလှူလေးကို ပွုလုပျမှာဖွဈတဲ့အကွောငျး မြှဝပေေးလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ပွတေီဦးရဲ့ ခဈြပရိသတျကွီးလညျး ထပျတူ ကုသိုလျတှေ ရကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော ။